Puntland oo cambaaraysy weerarkii Garoowe, Isimmada oo is-xakamayn naawilay iyo dhimashadii oo korodhay. – Radio Daljir
Puntland oo cambaaraysy weerarkii Garoowe, Isimmada oo is-xakamayn naawilay iyo dhimashadii oo korodhay.
Garoowe, April 07 – Dawladda Puntland ayaa si wayn u dhaliishay dilkii shalay ka dhacay magaalada Garoowe xilli uu qofkii saddexaad u dhintay dhaawacii shalay ka soo gaaray weerarkii lagu bartilmaameedsaday allaha u naxariitee Maxamed Yaasiin Ilkacase halkaas oo ay markiiba ku nafwaayeen isaga iyo mid ka mid ka tirsanaa ilaaladiisii. Dhinaca kalena Issimmada Puntland ayaa shacabka Puntland ugu baaqay in ay is xakameeyaan.
Qofka saddexaad oo isna ka tirsanaa ilaalada Ilkacase ayaa saaka ku geeriyooday Isbitaalka guud ee Garoowe, taas oo ka dhigaysa dadka weerarkaas ka dhintay saddex qof. Waxa la sheegayaa in ay iyadana xaalad aad u daran ku sugan tahay gabar iyadana shalay ku dhaawacantay shilkaas.
Shalay ayaa magaalada Garoowe waxa aas qaran loogu sameeyay dadkii ku geeriyooday weeararkii foosha-xumaa ee ka dhacay bartamaha magaalada. Aaska oo shalay bacdal-casarkii ka dhacay ayaa waxa ka soo qayb-galay wasiirro, xildhibaano, ardayda dugsiyada, culumaa’udiin iyo in badan oo ka mida ehelladii labada marxuum.
Wasiirka wasaaradda waxbarshada Cabdi Faarax Juxa oo saxaafadda kula hadlay qabuuraha ayaa tacsi u diray dhammaan ehelladii qaraabadii iyo asxaabtii ay kageeriyoodeen labadii ruux ee shalay (Arbaca)lagu dilay magaalada Garoowe, waxaana wasiirku sheegay in dawladda Puntland ay aad uga xumaatay falkii lagu dilay allaha u naxariistee Maxamed Yaasiin Ilkacase.
Dhinaca kalena isimmada iyo hoggaanka dhaqanka Puntland ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland in ay kawaantoobaan waxyaalaha dhallinkara colaadda.
Af hayeenka isimada Puntland, Garaad C/llaahi Cali Ciid oo lahadlayay Daljir ayaa ugu baaqay dadka reer Puntland in looga baahanyahay in ay kawaantooda waxyaalaha keeni kara dulmiga iyo dhibaato ka dhex curata gudaha Puntland islam markaana ay maanka ku hayaan in ay ilaashadaan nabadda iyo dawladnimada ay haystaan.
Ciidamada ammaanka Puntland ayaa magaalada xarunta ah ee Garoowe iyo nawaaxigeeda ka wada howl-gal aad u ballaaran oo ay ku baadi-goobayaan dambiilayaashii gaystay weerarkii khasaaraha badnaa ee shalay ka dhacay meel ay aad ugu badan yihiin xarumaha xasaasiga ah ee dawladda iyo waliba joogitaanka ciidamada ammaanka. Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Qarjab ayaa xalay Daljir u sheegay in ay tiro ahaan iyo magac ahaanba u tirinayaan fuliyayaasha weerarka, waxana uu dhacadada ku tilmaamay aanaysi qabiil.